Rajoelina sy Ravatomanga : Mikasa hamerina ny 2009 -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina sy Ravatomanga : Mikasa hamerina ny 2009
31/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny Faritanin’i Mahajanga indray no saika lasibatry ny korontana miharo fandrobana tahaka ny nitranga teto Antananarivo ny faha-26 Janoary 2009. Mikasa ny hamerina ny zava-nisy tamin’ny taona 2009 mantsy ry Andry Rajoelina sy ny forongony, mialokaloka ao ambadiky ny fanehoan-kevitra an-dalambe kanefa mikotrika fanonganam-panjakana.
Voatery nandray fepetra manoloana izany ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny ACM, ka nisakana ny fahafahan’ny fiaramanidina saika hitondra an’i Andry Rajoelina hisidina ny habakabaka hihazo an’i Mahajanga. Efa fantatra ary tsy ilàna fanazavana betsaka intsony fa fanonganam-panjakana sy famerenana ny zava-nisy tamin’ny taona 2009 no ao ambadik’izao hetsika ataon’i Andry Rajoelina sy ny forongony izao. Tsy sahy nanomboka izany hetsika izany teto an-drenivohitra ny tenany, satria mahafantatra tsara fa tsy hanaiky izany intsony ny mponin’Antananarivo izay tena lasibatra tanteraka tokoa nanomboka ny faha-26 Janoary hatramin’ny 7 Febroary 2009 sy nandritra ny fitondrana HAT iray manontolo. Ny filoha tale jeneralin’ny SODIAT, Mamy Ravatomanga mihitsy moa no nitarika ny fihetsiketsehana tany Mahajanga omaly, izay tsy iza akory fa tompon’ny fahefana tsy refesi-mandidy nandritra ny Tetezamita.
Ity taona 2018 ity irery ihany no hany fanantenan’ireo mpanongam-panjakana hiverenana eo amin’ny fitondrana, ary izany no antony mahatonga azy ireo mitady izay fomba rehetra hisian’ny korontana mba tsy hisian’ny fifidianana. Tetezamita vaovao tokoa mantsy no tanjon’ny MAPAR sy ny mpiara-dia amin’i Andry Rajoelina, ka ny fy famerenana ny paikady tamin’ny taona 2009 no lalan-tokana ho azy ireo amin’izany. Marihana moa fa maherin’ny 500 ny aina nafoy nandritra ny “Alatsinainy Mainty” teto Antananarivo ny taona 2009, ary orinasa sy tranombarotra an-jatony kosa no kilan’ny afo.
Onitiana-Penjy:REHAREHAN’NY MPANAO GAZETY
“Ny mpanenjika tsy eo aloha fa aoriana !”, araka ny fomba fitenenana malagasy. Isan’ireo niantefan’ny fanenjehan’ny mpialona ihany koa ireto mpanao gazety roa ireto, dia ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy sy ny ben’ny tanànan’Ivato ...Tohiny